HBXG 938G Wheel Loader |
Weichai DEUTZ dizeli injini, yakakwirira simba uye kuvimbika. Hydrodynamic transmission, matatu-element uye single stage torque converter, yakakwirira kuvimbika, nyore kugadzirisa. Hangzhou Advance Gearbox Boka BS428 powershift kutapurirana, kunyatsoshanda uye kugadzirisa kuri nyore. Gear-shift inodzorwa ne
● Zvimiro uye Zvaungada
1. Weichai DEUTZ dizeli injini, simba rakakwirira uye kuvimbika.
2. Hydrodynamic transmission, matatu-element uye single stage torque converter, yakakwirira kuvimbika, nyore kugadzirisa.
3. Hangzhou Advance Gearbox Group BS428 powershift transmission, yakakwirira kunyatsoshanda uye nyore kugadzirisa.
4. Gear-shift inodzorwa ne flexible shaft inoita kuti kushanda kuwedzere uye kwakavimbika.
5. Single lever joystick control system, yakasununguka uye inoshanduka kushanda.
6. Mapaipi akavharirwa kaviri ehydraulic pipeline ane 24 ° awl uye O ring yepasi rose, inodzivirira kubuda kwemafuta zviri pachena;
7. Mhepo pamusoro pe hydraulic disks pamabhureki mana emavhiri.
8. Nzvimbo yakakura yakataurwa furemu inoita kuti kushanda uye kufamba kugadzikane.
9. Chishandiso chekushanda chine otomatiki yekuyera kugona panzvimbo yepamusoro.
10. Bucket articulated points inotora yakavharwa, lubricated, dust-proof layers, iyo ine muridzi wekugara kwakanaka.
11. Integral, umbozha chiridzwa bhodhi.
12. Itsva, kabhini yeumbozha.
● Zvinotaurwa Nezvakawanda
Bucket kukwana 1.8 m3 Min. kushandura radius
(kunze kwemavhiri ekumashure)
Rated load 3000 kg Kufambisa kona 36º
Dumping urefu 3000 mm Min. ground clearance 375mm
Boom kusimudza nguva 5.5 S Tread 1800mm
Nguva yose yebhasikoro 10 S Injini muenzaniso WP6G125E23
120 kN Madiro eTire 17.5-25
Max.drawing simba 90 kN Zvose zviyero 7020*2510*3300mm
Max. Gradeability 30° Kushanda uremu 10600kg
Zvakapfuura: HBXG 955T Wheel Loader
Zvinotevera: GYD80/100 Mobile Power Station
Diki Wheel Loader